IINDIDI ZESINKS YEGUMBI LOKUHLAMBELA (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iindidi zeSinks yegumbi lokuhlambela (Isikhokelo sokugqibela)
Iindidi zeSinks yegumbi lokuhlambela (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela kwiintlobo zeesinki zokuhlambela kubandakanya imifanekiso kunye nemibono yoyilo.
Xa utshintsha indawo yakho yokuhombisa, isinki yenye yezona ndawo kugxilwe kuzo. Ke, iyavakala into yokuba unokufuna ukutshintsha izinto. Unokumangaliswa kukuba olu khetho alukho lula njengokuba ucinga. Zininzi iintlobo, uyilo, kunye nokukhetha. Ngalesi sikhokelo, uya kuba nakho ukwenza isigqibo esifundisiweyo sokuba yeyiphi isinki yokuhlambela yeyona ilungileyo kwikhaya lakho.
Xa kuziwa kwiindawo zokuhlambela zangasese, into yokuqala oza kuyiphawula kukuba kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo. Ngaphambi kokwenza isigqibo, kubalulekile ukuba wazi umahluko phakathi kwabo ukukunceda ukhethe okufanelekileyo kwindawo yakho.
Izitayile zeSink zokuhlambela
Ukuthoba isinki yegumbi lokuhlambela
Wall Wall lokuhlambela Sink
Isinki yesitya sokuhlambela
Sinks Igumbi lokuhlambela kwamanqwanqwa
Yehla kwigumbi lokuhlambela lokuntywila
Isinki yegumbi lokuhlambela laseKoneni
Uyilo lweSink lokuhlambela
Igumbi lokuhlambela elisisikwere
Yoxande kumgxobhozo echibini
Igumbi lokuhlambela elinombhoxo
Ukuntywila kwigumbi lokuhlambela kabini
Ngaphezulu kwe-Counter Baths Sinks
Igumbi lokuhlambela elitshonayo
Ifaskoti lokuhlambela Sinks
Sinks Igumbi lokuhlambela
Iglasi yegumbi lokuhlambela liyatshona
Sinks lokuhlambela ilitye
Sinks lokuhlambela eziphathekayo
Stainless Sinks lokuhlambela
Ukuntywila kweNdlu yokuhlambela yePorcelain
Igumbi lokuhlambela laseCorian liyatshona
Ngaphantsi Sinks lokuhlambela
Indlu yokuhlambela yangasese isinki
Isinki zangasese zangoku
Rinks lokuhlambela Sinks
Iinxalenye zokuntywila kwigumbi lokuhlambela
Imilinganiselo yoSink yokuhlambela
Indlela yokulinganisa iSink yokuhlambela
Ubungakanani obuLungileyo bokuSinki kwegumbi lokuhlambela?
Yeyiphi eyona nto ifanelekileyo yokuntywila kwigumbi lokuhlambela?
Ixabiso lokutshintshwa kweSinki yokuhlambela
Phinda uhlaziye iSink yokuhlambela
Ngaba Ungapeyinta iSink yegumbi lokuhlambela?
IiFinki zokuntywila ngegumbi lokuhlambela
Amampunge kwigumbi lokuhlambela
Uyikhetha njani i-Sink Vanity
Sink lokuhlambela Vanity
Corner lokuhlambela Sink iKhabhinethi
Isinki yokuhlambela ezimeleyo
Imiphezulu yeetafile echibini lokuntywila
Ucoceka njani iSink yokuhlambela
Uyifaka njani iSink yokuhlambela
Nazi iindlela ezithandwayo zokuntywila kubandakanya ulwazi malunga nokhetho olukhulayo.
Okokuqala, makhe sijonge kwiisinki zokuhlambela ezingaphantsi. Ezi zikwabizwa ngokuba kukuntywila okungaphantsi kwekhawuntari. Kungenxa yokuba zifakwe phantsi kwekhawuntari. Zifana kakhulu nokudilika kwesinki esiza kujonga kamva.
Oku kufakwe ngokutywina isitya sesinki ukuya ngaphantsi kwetheyibhile. Oku kunika isinki kunye ne-countertop, ukusuka phezulu, ukubonakala okucocekileyo kunye okufanayo. Akukho mlomo uphuma ngaphandle kwikhawuntara. Ngenxa yokusebenza kwazo, ezi ntlobo zeesinki zokuhlambela zihlala zifumaneka kwiindawo zikawonke-wonke ezinje ngezindlu zangasese zikawonke-wonke, iivenkile zokutyela, kunye namagumbi ehotele. Uyilo luye luboleke ekunikezeni igumbi lokuhlambela indawo ethe chatha malunga nesinki.
Bona ngakumbi ukuhla kwehla IAmazon
Udonga lwentaba lokuhlambela izindlu zokuhlambela zazikhe zathathelwa ingqalelo njengokhetho lweshishini. Nangona kunjalo, kule minyaka idlulileyo bakhule bathandwa kwiindawo zokuhlala zabucala.
Ezi sinki, njengoko igama lisitsho, zinyuka ngokuthe ngqo eludongeni endaweni yokufakwa kwi-countertop. Ngokwesiqhelo le nto ishiya imibhobho ibhencekile yiyo loo nto ibangela ukuba kube yimveliso yoshishino okanye nokuba kukuvuna. Ezi sinki zihlala zizikwere okanye iingxande kodwa kukho iinketho ezijikelezayo kunye neenketho zekona ezikhoyo.
Olu hlobo lwesinki luhlala lusetyenziswa kumagumbi okuhlambela amancinci kuba linika indawo yokucinga. Ikwayenye yeentlobo zokuntywila ezifikelelekayo.
Izikhephe zeesitya zithandwa kakhulu kwaye yindlela entle yokufumana uyilo lodidi oluphezulu ngaphandle kwexabiso loyilo lodidi oluphezulu. Isitya sokuhlambela isitya sihleli ngaphezulu kwekhawuntara ngokungathi ziibhasin zokuhlambela ezazisetyenziswa.
Eyona nto iqhelekileyo, oku kuyilo olujikelezayo olulula kodwa abayili beze nokhetho oluhle nolwahlukileyo ngokunjalo. Ziza kwizixhobo ezahlukeneyo kunye nezinye zezona ziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuba yiglasi kunye nobhedu.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ezi sinki azomelele kangako xa kufikwa kuxinzelelo njengezinye iintlobo zokuntywila. Ukuba, umzekelo, umntwana utsala esinkini uzama ukufikelela kulawulo, isinki kunokwenzeka ukuba yonakale. Funda ngakumbi malunga inqanawa iyazika ngokulungileyo kunye neengozi Apha.
Isinki zokuntywila lolunye ukhetho olwahlukileyo. Zifakwe kumgangatho kunye nodonga. Inxalenye ekhokelela kumgangatho ukuya kwisitya ngumlenze omnye okanye isiseko.
Kukho, ewe, okuhle kunye nokubi kolu hlobo lokuntywila. Kwicala elifanelekileyo, ayithathi ndawo kwaye, njengodonga olubekwe eludongeni, inika umbono wento engaphezulu.
Oku kuyenza ibe lukhetho olukhulu kumagumbi okuhlambela amancinci okanye kwisiqingatha sebhafu. Zilula ukuzicoca kwaye ngenxa yokunqongophala kwekhawuntara kuphelisa nakuphi na ukungqubana ekuqokeleleni.
iimpahla ezimhlophe zomtshato womtshato
Ngakolunye uhlangothi, abanikeli nayiphi na ikhawuntara okanye indawo yekhabinethi. Banokuba ngumceli mngeni omkhulu ukufaka kuxhomekeke kwinqanaba lakho lobungcali bemibhobho.
Jonga le isiseko sokuntywila IAmazon
Isinki zeConsole, xa zaphulwe, zinamacandelo amabini aphambili. Oku kubandakanya into eyaziwa ngokuba yiConsole- okanye ume-ngeenyawo zemilenze. Inxalenye yesibini sisinki sesinki uqobo. Esi sitya sinyuswe eludongeni kwaye sikwabanjwe yimilenze.
Kwezi ntlobo zokuntywila, akukho khabinethi ingezantsi kwesinki kwaye imibhobho ibonakala. Zihlala zinxulunyaniswa noyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje lokuhlambela.
Inqaku elidityanisiweyo kwizinki ezininzi zeconsole ngumqobo phakathi kwemilenze ukuxhoma itawuli. Ngelixa bengenayo indawo yemveli yokuma, isinki ihlala ibanzi ngokwaneleyo ukuba ishiye isithuba macala omabini olawulo lwetephu.
Jonga le console icwila kuyo IAmazon
Ukulahla kwiindawo zokuhlambela-ngamanye amaxesha kubhekiswa kuzo njengeesinki zokuzibamba-zihlala zihlala ziyinto abantu abacinga ngayo xa beqala ukucinga ngesinki yokuhlambela. Ezi sinki ziwela kwindawo evulekileyo kwindawo esekwe phezulu. Umlomo wesinki uhleli nje ngaphezulu kwetafile ukuxhasa ubunzima besinki.
Ezi ntlobo zeesinki zihlala zilungile kumagumbi okuhlambela amakhulu-anjengeendawo zokuhlambela-ezifuna igumbi lokugcina elininzi. Kungenxa yokuba ezi sinki zihlala zinendawo eyaneleyo yokubala kunye nendawo yekhabhinethi engezantsi kwesinki.
Ezi sinki zinokubiza kakhulu ukuzifaka ukuba awunayo imodeli enje efakwe kwigumbi lakho lokuhlambela. Oku kungenxa yokuba bafuna ikhawuntari kunye nethontsi lokusikwa kuwo.
Jonga le isinki yokungena kwi IAmazon
Izinkonkxa zenzelwa ukuba zingene kwikona yegumbi lokuhlambela kunakwindawo ethe tyaba eludongeni olunye. Ezi ziindlela ezintle zokongeza umnxeba wangoku kwindlu yangasese encinci. Ngelixa ezi zinokuba nekhabhathi encinci phantsi kwazo, zihlala zivelisa imibhobho endaweni yazo. Ngelixa ezi sinki zigcina indawo, aziboneleli ngendawo yezinto zokuhlamba.
Xa ifakiwe, iisinki zokuhlambela zekona zinezinto eziphambili ezibekwe kwikona apho kudibana khona iindonga. Inkxaso eyongezelelweyo ibekwe kumacala esinki kudonga ngalunye.
Isinki zokuntywila zihlala zinxulunyaniswa noyilo lwaseYurophu. Ezi ziqula ezinkulu ezinokusetyenziswa njengenye indlela yokuntywila kabini ukuba ufuna ukhetho olwahlukileyo.
Uninzi lweesinki zokusefa luxande kunye nemigca ecocekileyo, echaziweyo. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela ezikhoyo. Ukujonga okuphucukileyo, iisinki ezincinci zomkhombe zihlala zisetyenziswa.
Iintsapho ezinabantwana zinokonwabela izitya zokuntywila ezinkulu, kungenjalo, kuba zilula ukuzicoca. Iisinki ezinkulu zomkhombe ziza ngexabiso lesithuba sokubala.
Indlela yokongeza umnwe wesiko kwisitya sakho sokuntywila kukuxuba kunye nokudibanisa izixhobo zekhompyutha.
I-ADA ehambelanayo isinks
Umthetho waseMelika okhubazekileyo wapasiswa ngo-1990 kwaye ujolise ekumiseni imigangatho yokhuseleko kunye nokusetyenziswa ngokulula kwabakhubazekileyo baseMelika. Izinki ezihambelana ne-ADA zenziwe ukuba zibe lula kwaye zikhuseleke nakubani na ukuba azisebenzise.
I-ADA ifuna ukuba ezi sinki zifakwe kwiindawo ezithile eziphakamileyo kunye nobunzulu ukuze zifikeleleke kubo bonke. Ngokukodwa, ezi sinki kufuneka zifakelwe kwindawo yokuba umntu okwisitulo esinamavili akwazi ukusebenzisa isinki. Oku kubandakanya indawo ephantsi kwesinki icacile kwaye ubunzulu bee-intshi ezili-17 okanye nangaphezulu kude nodonga.
Njengoko ujonga iintlobo zeesinki, uyakufuna kwakhona ukucinga ukuba loluphi uhlobo loyilo olulungele wena. Nazi iimodeli zesinki ezaziwayo onokufuna ukuzisebenzisa kwindawo yakho yokuhlambela.
Izikwere zesikwere zinobubanzi obulinganayo nomlinganiso wangaphambili nangasemva. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abanalo ubunzulu obulinganayo kwaye isitya sinokuhla ngqo phantsi okanye kwithambeka.
Ngenxa yemigca ecocekileyo yesinki yegumbi lokuhlambela, zihlala zithandwa kuyilo lwangoku. Bathandwa ngokukodwa kumagumbi okuhlambela amancinci xa kuthelekiswa neesinki zoxande kuba zihlala zithatha indawo encinci.
Jonga esi sikwere sizikise IAmazon
Izitya zokuhlambela ezixande zinobubanzi obukhulu kunomlinganiso wangaphambili nangasemva. Obu bubume obuhlala busetyenziswa kwiindidi zesinki ezinjengeesinki zomkhombe. Njengesinki yesikwere, imigca echaziweyo yesinki esixande isebenza kakuhle kuyilo lwangoku kwaye abanabunzulu buchaziweyo.
I-Oval sinks sinks lukhetho lwesiko kwaye zihlala ziyingcinga yokuqala enxulunyaniswa nokwehla kwesinki. Abathandwa kakuhle kuyilo lwangoku kuba bengeyiyo ijiyometri, kodwa basebenza kakuhle kuyilo lwe-rustic.
Ngelixa zihlala zinxulunyaniswa nokwehla kwesinki, imilo embhoxo ingasetyenziswa nangasiphi na isitayile.
Izitya zokuhlambela ezibini zinezibini zokuhlambela kunokuba ibe nye. Ezi zinokuba kulo naluphi na uhlobo lokuntywila kodwa uninzi lwabanini makhaya lukhetha isibini sokudaka. Ngokungafaniyo namashinki aphindwe kabini ekhitshini, ezi zihlala zingangqalanga ecaleni kodwa zinendawo encinci phakathi kwazo.
Izitya zokuhlambela ezibini zihlala zisetyenziswa kwigumbi lokuhlambela. Zikwasetyenziswa kumagumbi okuhlambela ekwabelwana ngawo adibanisa amagumbi okulala amabini. Ngokubanzi, zihlala zisetyenziswa kakuhle kumagumbi okuhlambela anokuba nabasebenzisi abaninzi ngaxeshanye.
Umzekelo, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo phakathi kwabantu abaninzi bezama ukuzilungiselela ekuseni, isibini sokuntywila sinokuba luncedo. Ukulahla kwiisinki eziphindiweyo zihlala zihlala zinendawo yokubala kunye nendawo yekhabinethi yezindlu zangasese.
Uyilo oluya luthandwa ngakumbi kukufakwa kwezi sinki zokuhlambela zingasentla. Olona hlobo luthandwayo loyilo luhlobo lwesitya sokuntywila senqanawa esasijonge ngaphambili.
Ngelixa isitya sokuntywila sihleli ngokupheleleyo ngaphezulu kwekhawuntari, ngaphezulu kweesinki zokubala zinokupheliswa kwakhona. Ezi ndlela zitshone kancinci kwikhawuntara kodwa zisaphuma ngaphezulu kwayo. Olu hlobo lwesitayile lusetyenziselwa ukubonelela ngezibonelelo zokuntywila kwenqanawa ngelixa usongeza uzinzo olongezelelekileyo.
Njengoko kuxoxiwe xa kugutyungelwa isinki esinki, ezi sinki zinokuwa xa kufikwa ekucoceni. Kunokuba nzima ukucoca indawo phakathi kwekhawuntari kunye nebhedi yesinki.
Isinki zokuhlambela ezidadayo zikhangeleka ngokungathi zizimeleyo zixhomekeke eludongeni lwendawo yangasese. Azinayo imilenze okanye izixhasi ezidibanisa nomgangatho kwaye, ngamanye amaxesha, imibhobho yamanzi iyafihlwa.
Ezi ntlobo zokuntywila ziyindlela efanelekileyo yokusebenzisa indawo encinci. Ikwayinto ebangel 'umdla yokusebenzisa isitetimente kuba azifani njengezitshizi ezinjengezidrophu okanye iisinki zekhonsoli.
Eyona nto iphambili kwezi ntlobo zeesinki kukuba aziboneleli ngendawo yokugcina. Oku kungenxa yokungabikho kwesithuba sekhabhathi ngaphantsi. Ngokwesiqhelo abanasithuba esijikeleze isitya sokugcina nokuba.
Iiselfini zokuhlambela iisinki okanye ifaskoti-ngaphambili isinki ziyazika kunye nomphambili wesitya uvezwe. Ngamanye amagama, bavalelwa kwikhawuntara - kufana nokwehla kwesinki - kodwa akukho siqwengana setafile phambi kwesinki. Ezi zihlala zikhethwa kwisibheno sabo seediliya.
Ezi zinto bezikade zibhetyebhetye kuba bebefuna ukufakelwa iikhabhathi ezizodwa. Ngoku, ezi zihlala ziyilelwe ukuze ziphinde zifakwe kwiibali ezikhoyo.
Isinki yefroni ihlala ixabiswa ekhitshini ngobunzulu bayo obumangalisayo. Kwizitishi zokuhlambela, iimodeli ezinzulu zihlala zihlohlwa. Oku kunokuba kukuntywilisela kumgxobhozo apho umlomo wesitya uphuma kancinci ngaphezulu kwekhawuntari. Ngenye indlela, zinokufakwa njengeendawo zokuntywila ezantsi kunye nekhawuntara egubungele imilebe yesinki.
Isinki zecopper zidunyiswa ngokufanelekileyo njengokhetho oluhle. Zihlala zisetyenziselwa ukongeza ukubamba kobuhle kuyilo lokuhlambela.
Ngcono nangakumbi, banika obu buhle ngelixa kulula ukubugcina kunye ne-antibacterial. Ukuba isinki isebenzisa ubhedu obucekeceke, kungenjalo, kunokugcinwa ngakumbi kunokujongana nokujijisana kunye nokubamba amazinyo.
Ngelixa benomngcipheko ophantsi wokubala, abacoci bendlu abakhohlakeleyo baya kubangela umonakalo. Ixesha elingaphezulu, ubhedu luyaphuhlisa patina kuthetha ukuba kuya kuba mnyama. Abanye babaninikhaya bathanda oku kujongeka kodwa inokuthintelwa ngokufaka isitywina esinkini.
Ezi sinki zongeza ixabiso kwikhaya. Ngelishwa, oku kubangelwe kukuba beza ngexabiso eliphezulu kunezinye izinto.
Jonga le isinki yobhedu IAmazon
Iglasi yegumbi lokuhlambela isinki yenziwe ngeglasi enobushushu. Olu hlobo lweglasi lwenziwa ngonyango lwe-thermal kunye neekhemikhali olubanceda ukuba bomelele kunezinye iintlobo zeglasi. Oku kuthetha ukuba akumele ukhathazeke ngokuqhekeka, iichips, ukuqhekeka, kunye nezinye ikhefu kangangoko unokucinga ngesinki yeglasi yokuhlambela.
Owona mqobo mkhulu kwiglasi yokuhlambela isinki kukuba amanzi anzima anokushiya amanqaku kuwo. Amanzi anzima ngamanzi aqukethe inqanaba eliphezulu lezinto ezichithakeleyo kuwo apho uninzi lwamanzi etephu lwenzayo. Ngethamsanqa, la manqaku akunakwenzeka ukuba acinywe kwaye anokuphathwa ngokulula ngabacoci bendlu.
Isinki zamatye zinokongeza ukubonakala kohlobo oluthile kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela. Zahluke ngokumangalisayo ngokuza kumyinge weemilo, ubungakanani, kunye noyilo. Ezi sinki zihlala ziqingqwe kwilitye elinye lamatye kwaye zinokubakho kwimilo esemgangathweni okanye engaqhelekanga.
Isinki zihlala ixesha elide ngokumangalisayo, ngoko azizukuqhekeka okanye ziqhekeke ngokulula. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukufumana okuninzi koku kuzinza, ezi sinki kufuneka zitywinwe. Oku kuya kubenza bangabinayo i-porous ukuze bangabinabala. Uyilo olugqityiweyo lwamatye amaninzi asezantsi nawo enza ukuba kube lula ukuzisula zicoceke ngokunjalo.
Olona phuculo lukhulu kumgxobhozo wamatye kukuba banokuba lutyalo-mali olukhulu. Olunye uqikelelo lubeka ezi sinki kangange- $ 1,000.
Iisinki zekhonkrithi aziqhelekanga kusetyenziswa, ngenxa yoko ziyindlela elungileyo yokunika igumbi lokuhlambela uyilo olwahlukileyo. Ngaphandle kwezinye izinto zokuntywila zekhonkrithi, nganye nganye ineempawu ezithile. Bahlala bongeza isichukumiso sangoku kwindlu yangasese.
Njengoko unokulindela kwikhonkrithi, le yinto ehlala ihleli ngokumangalisayo. Eyona ngxaki inkulu xa isiza kuzinza kukuba ikhonkrithi ithanda ukuqhekeka, ke kuyakufuneka ukuba itywinwe amaxesha ngamaxesha. Xa ezi chips nokuqhekeka kusenzeka, kubalulekile ukuba ujongane nazo kwangoko ukuze zingabi mbi.
Ezi sinki zibiza kakhulu. Oku kuhlala kungenxa yokuba ngamanye amaxesha kufakwa njengesinki kunye nekhawuntari kwisiqwengana esinye.
Isinyithi engenasici yinto edumileyo yokukhetha izinto zokuntywila, ngakumbi ekhitshini. Ezi sinki zibanjelwe ikakhulu ikakhulu ngenxa yokuba zigudile ngenkangeleko kwaye ziyamelana namabala amanzi.
Ezi sinki azongezi ixabiso lemali kwikhaya ngokwendlela yazo esemgangathweni kuba aziboneleli ngenkangeleko ekhethekileyo.
Izitya zensimbi ezingenasici zifaneleke ngakumbi xa amanqanaba aphakamileyo e-nickel afakiwe kulwakhiwo lwayo. Nge-nickel eyongeziweyo, isitya sokuhlambela siyakuxhathisa ngakumbi kwizifotho kunye nebala.
Unokumisela ukuhlala okuzinzileyo kunye ne-nickel yoxinaniso lwentsimbi engenasici ngokujonga umlinganiso wayo. Inqanaba elisezantsi lenani legeji, ukujiya kunye nokuqina ngakumbi kwesinyithi kunye nenickel ekhoyo ngoku.
Jonga le isinki yentsimbi engenamatshini IAmazon
I-Porcelain ekwabizwa ngokuba zizikram zenziwe ngokudityaniswa kodongwe, isinyithi kunye neglasi. Le yinto yokwakha eqhelekileyo kwizindlu zangasese njengoko ihlala isetyenziswa kwithayile.
Le nto imnandi kumgxobhozo kuba ine-absorbency ephantsi yokufuma, okuthetha ukuba ayizukuvuza kwaye kunqabile ukuba bahlupheke kumabala emanzi. Icala elisezantsi leesinki ze-porcelain kukuba ayizizo ezona ndlela zomeleleyo ezikhoyo. Bangakwazi ukusika ngokulula okanye ukuqhekeka kodwa akukho lula ukuzilungisa.
Isinki zeporcelain zimalunga nexabiso elifanayo nezitshizi zentsimbi kodwa zinokubaleka ziphezulu ukuba kufakwa isinki yesiko.
ICorian luphawu lwezixhobo kubandakanya i-acrylic polymer kunye nealumina trihydrate. Izinto eziphathekayo zisetyenziswa njenge-countertop. Kananjalo, xa isetyenziswa njengesixhobo sokuntywila, ihlala ifakwa njengesixhobo sokujongela phantsi okanye esidityanisiweyo ukunika isinki kunye nokulwa nokubonakala okungenamthungo.
I-Corian ihlala ibizwa ngokuba yi-Corian quartz kwaye iqulethe ukuya kwiipesenti ezingama-93 zempahla ye-quartz. I-Quartz yimveliso ehlala ixesha elide enobushushu kunye nokukrala okunganyangekiyo.
Yintoni ebangela ukuba iCorian ikholise izihlwele kukuhlala kwayo. Iyaxhathisa kubushushu, imikrwelo, amabala, kunye neekhemikhali. Kuba ihlala ifakwa njengesinki edityanisiweyo kunye ne-countertop, kunokuba yinto ebiza kakhulu.
Inoveli egqwesileyo kunye nokukhetha kwale mihla xa isuka ekukhetheni isinki yokuhlambela isinki engapheliyo. Ezi sinki azinayo idreyini yendabuko yokujikeleza. Endaweni yoko, basebenzisa islot ejikeleze imiphetho okanye omnye umda wesinki. Kananjalo aziqhelekanga ngokunzulu. Oku kuncipha, kudityaniswe nenyani yokuba iidreyini azinaso isivalo, musa ukuvumela ukuba izitya zizaliswe.
Ezi sinki zisebenza kakuhle kuyilo lwala maxesha. Zingafakwa ngaphezulu kwekhawuntari, njenge-drop in, okanye njengendawo yokuntywila yokuhlambela. Banokuza nakweyiphi na imilo ukusuka kubume obuqhelekileyo ukuya kwisithethe, esingaqhelekanga. Kukho neesinki ezingenasiphelo ezifana neetafile ezithe tyaba.
Ukuhonjiswa kwendlu yasefama yanamhlanje kubopha kunye uyilo lwe-rustic- esiza kujonga kamva-kuyilo lwangoku. Ngokukodwa, isebenzisa ubulula kunye nokwamkela iindwendwe kwindlu esefama kunye nemigca ecocekileyo esetyenziswayo uyilo lwangoku.
Xa kuziwa kutshona, oku kuthetha ukuba uyakufuna ukukhetha isikwere okanye imilo yoxande yesinki. Ukuya kuthi ga kwiindidi, iifaskoti sinks kunye neestestal sinks ziyaziwa. Ukuntywila esinkini kukwasetyenziselwa ukubiza uyilo lwendlu yasefama.
Iisinki ezingena kunye noyilo zihlala zimhlophe okanye zi-beige kunokugqitywa mnyama. I-Porcelain yinto esetyenziswa rhoqo.
Uyilo lwala maxesha, njengoko bekutshiwo ngaphambili, lujolise kwimigca ecocekileyo. Ikwasebenzisa imibala engathathi hlangothi, ubuncinci, kwaye-ngamanye amaxesha-ugxininiso kwizixhobo ezilunge nokusingqongileyo.
Ukubiza ukungafani okongeza ukwenziwa kunye nokuchaphazeleka kwendalo kuyilo lwala maxesha, isinki yelitye inokuba ngumdla. Nangona kunjalo, ukunamathela kwizinto ezi-sleek kunye nemigca ecocekileyo, ezi sinki zoxande kunye nezikwere lolona khetho lufanelekileyo. Isetyhula isinki - ngakumbi ngaphezulu kweesinki zokubaleka- inokuba lolunye ukhetho.
Isinki sokudada, isinki yesitya, isinki zeconsole, kwaye phantsi kwesinki zokuba zonke zinokukhethwa ezizibolekayo kuyilo lwangoku. Okungaphezulu kwale mihla kuya kuba kukuntywila okungapheliyo. Imibala engathath'icala ibhetele kakhulu, ke isinki emhlophe okanye emnyama iya kulunga kakuhle.
Uyilo lweRustic luthatha esinye isiqingatha sendlu yanamhlanje yefama yoyilo kwaye luhamba nayo. Olu hlobo lokuhombisa luhlala lujolise kwimibala efudumeleyo kunye nobuhle bendalo. Ayigxininisi kwimigca echaziweyo njengoyilo lwangoku kwaye ibuyiselwe umva kwaye iyindalo.
Ukhetho olucacileyo kwangoko kukuntywila ngamatye. Ivela ngobuhle bendalo kunye nokungaqhelekanga kunye neemilo zesiko ziya kwamkeleka. Ngaphandle koko, i-apron sink okanye i-pedestal sink inikeza indawo yakudala yokufama. Ukuhla kwiisinki kuyafana nalo mxholo.
Njengoko bekutshiwo, imibala efudumeleyo yeyona ilungileyo kuyilo lwe-rustic ukuze isinki yakho ikuncede. Uninzi lukhetha ukugcina iisinki zalo zimhlophe okanye cream.
Jonga le ndlu yokuhlambela i-rustic IAmazon
Isitya sokuhlambela lelona candelo liphambili. Eli linxalenye lesinki eligcina amanzi xa kuvulwa enye indawo yesinki, itompu.
Umbhobho uvuliwe kwaye ucinyiwe ngolawulo. Oku kunokuba ngamaqhina, ukujija okanye ukuphatha. Isinki inendawo yokumisa enokusetyenziselwa ukuvala idreyini.
Ukufakwa kwemibhobho yesinki ngokwesiqhelo kwenziwa ngemibhobho yobhedu. Le mibhobho ibanjwa ngokudibeneyo kwaye yenziwa ukuba ingangeni manzi ngezinto ezifana nezinto zokuwasha kunye namatywina.
Xa ufaka ezinye iindawo esinkini, isiqwenga esiphambili yindibano yokuntywila. Oku kuthengiswa njengekhithi eya kuthi iqulethe onke amalungu afunekayo ukubuyisela indawo esele ikhona. Qiniseka ukuba into oyithengayo iyahambelana nokugqitywa kwayo, kukumelana nokubola kunye nohlobo lwesinki onayo.
Njengalo naliphi na elinye icandelo loyilo lwangaphakathi, kubalulekile ukufumana isinki yokuhlambela elingana negumbi lakho lokuhlambela. Ukuba isinki ithatha igumbi elininzi kakhulu kwigumbi lokuhlambela okanye ijongeka incinci ngendlela engaqhelekanga, iya kulahla uyilo lwakho. Ke, kubalulekile ukulinganisa indawo onayo yesinki yokuhlambela kwaye ukhethe isinki ehambelana nendawo yayo.
Ukutshintsha isitya sokuhlambela sangoku ngesitayile esifanayo, linganisa ubude, ububanzi, ukuphakama, kunye nobunzulu.
Ukulinganisa ubude nobubanzi, sebenzisa iteyiphu kwaye ulinganise ukusuka kumda ukuya kumda wesinki. Oku kubandakanya ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye nokusuka ngaphambili kuye ngasemva.
Ubunzulu besinki ngaphakathi kwesitya. Kuyanceda ukumisela ukuba isitya sinokubamba malini. Ke, misela umgama phakathi komphezulu wesitya kunye neyona nzulu yayo.
Ukuphakama kumlinganiso owahlukileyo. Oku kungaphandle kwesinki. Ikude kangakanani umhlaba umphezulu wesinki? Ukuhla okumiselweyo kwiisinki, oku kuya kuba ngumgama phakathi komphezulu wekhawuntara kunye nomgangatho.
Ukuba ukhangele idrophu entsha kwisinki, linganisa indawo onayo uze uthabathe malunga nee-intshi ezi-4 ukuya kwezi-6 kwicala ngalinye. Oku kuyakukunika indawo eninzi yekhawuntari ejikeleze isitya sokuhlambela.
Ukulinganisa iVinki yeSink yokuhlambela
Ubungakanani obukhulu besinki yokuhlambela buya kuxhomekeka kubungakanani bendawo yakho yokuhlambela. Ukuhlamba okugcweleyo okusemgangathweni, ubukhulu besinki ejikelezayo ihlala ihlala phakathi kwe-16 kunye ne-20 intshi ubukhulu. Iisinki eziziingxande zihlala zinobubanzi obumalunga nee-intshi ezingama-19 ukuya kuma-24 kunye nomlinganiso ukusuka ngaphambili ukuya ngasemva ngeesentimitha ezili-16 ukuya kuma-23.
Ukufikelela kubunzulu, uninzi lweesinki zokuhlambela zi malunga nee-intshi ezi-5 ukuya kwezi-8.
Izinki, ngokubanzi, zihlala zenziwe ngentsimbi engenasici okanye i-porcelain njengoko ezi zezona zinomdla kakhulu kuhlahlo-lwabiwo mali. Insimbi engenasici inokubona ukusetyenziswa ekhitshini ngelixa i-porcelain inokwenzeka kwindawo yokuhlambela.
Ngokobuchwephesha, yonke into enokusetyenziselwa isinki inezinto ezilungileyo nezingalunganga. Eyona ilungileyo ixhomekeke kwiimfuno zakho kunye nezinto ozithandayo.
Ilitye okanye isinki yobhedu ilungile xa ujonge ukonyusa ixabiso lekhaya lakho kodwa hayi njengelingeneyo ukuba uthenga kuhlahlo-lwabiwo mali. Isinki zeglasi ziyindlela ebalaseleyo yokwenza indawo yokujolisa yenqanawa kodwa kuya kufuneka ulumkele ii-watermark. Ukuntywila okunesipili kunokuba kuhle ukuba ufuna into eyomelele kakhulu kodwa ifuna ulondolozo oluncinci ukuze iphathe iintanda.
Ukufumana izinto ezilungele isinki yakho yokuhlambela, buyela umva kwaye ucinge malunga nento oyifunayo uze uthelekise izinto ezilungileyo nezingalunganga.
Ixabiso elichanekileyo lokutshintshwa kwesinki yokuhlambela liya kuxhomekeka kwizinto ezimbalwa. Oku kubandakanya uhlobo lwesinki, into eyenziweyo, kunye nokuba kubaluleke kangakanani ukusebenza.
Umndilili welizwe weendleko zokutshintshwa kwesinki kunye nabasebenzi eUnited States malunga ne- $ 380. Uluhlu oluqhelekileyo luhlala malunga ne- $ 207 kunye ne-551 yeedola kodwa ungaphantsi okanye ngaphezulu kuxhomekeke kubani osebenza naye, ukuba uyifaka ngokwakho, kunye nemodeli efakiweyo.
Ukulungisa ngokutsha isinki yokuhlambela yindlela entle yokwenza isinki yokuhlambela yakudala ibonakale intsha. Ingumbono olungileyo ngokukodwa ukuba uyaluthanda uhlobo lwetyinki yokuhlambela kwaye akukho monakalo unje ngokuqhekeka. Ukulungiswa ngokutsha kunokuba yindlela elungileyo yokonga imali xa kuthelekiswa nokuhlawulwa kotshintsho olupheleleyo. Ewe kunjalo, ukuba ujonge i-revamp iyonke ngohlobo lwesinki eyahlukileyo, ukuphinda usebenze ngokutsha ngekhe kwanele.
Inkqubo yokufaka ngokutsha isinki ekhitshini yile ilandelayo.
Phambi kokuba uqale uqiniseke ukuba uneebhekile, isixhobo sokuphefumla kunye nempahla yokukhusela. Ukuqinisekisa ukuba i-glaze ayonakalisi indawo ekufuphi, sebenzisa iphephandaba okanye i-tarp kwindawo osebenza kuyo.
Ukuqala inkqubo uya kufuna ukucoca ngokucokisekileyo umphezulu wesinki usebenzisa umgangatho ococekileyo wokucoca konke ukungcola okanye ukungcola.
Emva koko uya kufuna ukususa okuninzi kwe-silicone caulking ngokusemandleni. Ngokusebenzisa i-silicone digester kuya kufuneka ukwazi ukususa ngakumbi intsalela yesilicone.
Inyathelo elilandelayo kukunxiba iiglavu zokhuseleko kwaye ukrwele ngononophelo isinki nge-asidi yokuncamathisela (isisombululo se-asidi) ukususa nayiphi na inkunkuma. Kufuneka iyekwe yome imizuzu eli-15.
Njengenyathelo lokugqibela lokucoca ngaphambi kokwenza i-glazing, faka i-degreaser ukuqinisekisa ukuba indawo yokuntywila ilungile. Hlanganisa isinki kakuhle kwaye mayime yome ngokupheleleyo.
Ngoku ukuba ukulungele ukuqala ukugcoba isinki yakho, faka i-epoxy primer usebenzisa ibrashi kunye nemivumbo. Ukuba unesitshizi, qiniseka ukuba ubanjelwe iinyawo ezimbalwa. Faka isicelo se-epoxy ngokulinganayo kuzo zonke iindawo zesinki.
Inyathelo elilandelayo lifuna ukuba ugqoke isinki nge-acrylic-urethane resin kwaye uyiyeke isete imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20. Okokugqibela faka i-polyurethane yokugquma ukuze ufumane indawo emenyezelayo yokuntywila.
Emva kokuba isinki yomile ungafaka isicelo se-silicone caulking usebenzisa umpu we-caulk. Faka isicelo se-caulk engile ngokulinganayo kangangoko unako.
Iindaba ezimnandi zezokuba ungapeyinta isinki yokuhlambela! Nangona kunjalo, ukupeyinta isinki akufani nokupenda udonga. Nantsi isikhokelo esikhawulezayo sendlela yokwenza njalo.
Ukuqala, susa itompu kunye nezibambo ukuze ube nesinki yokujongana nayo. Ikwangumbono olungileyo ukunxiba imaski ngelixa upeyinta isinki ukuphatha nawuphi na umsi.
Emva koko, coca isinki kakuhle ukuze ungapeyinti nakweyiphi na inkunkuma. Uya kudinga ukusebenzisa i-epoxy, hayi ipeyinti yodonga, kwisinki yakho ukumelana nokufuma.
Faka isicelo sengubo ekhanyayo ngebrashi ekumgangatho ophezulu - ungakhathazeki malunga neebrashi, i-epoxy iya kuhlala. Ukuba isinki yakho iyithoni emnyama, unokufuna ukufaka ezinye iingubo emva kokuba umaleko wangaphambili womile ngokupheleleyo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa ukhetha itompu kukujonga inani lemingxunya isinki yakho, ikhawuntari, okanye udonga olunayo. Kwindawo ezininzi zokuntywila, kukho indawo yompompo enolawulo ngapha nangapha. Iimpompo zithengiswa ngeendlela ezine:
● Umngxunya omnye
● Yande ngokubanzi
● Ukunyuka udonga
Emva koko, uya kufuna ukuqaphela ubungakanani. Ukuba awunayo indawo eninzi, awuyi kufuna ukuthenga itompu enkulu. Nje ukuba ubuchwephesha buchongiwe, unokujonga kwizitayile kwaye ugqibe.
Olunye ukhetho olunomdla kumagumbi okuhlambela yingxangxasi yamanzi. Ezi mpompo zibonelela ngesitshizi esibanzi kwaye esingenamandla kangako kwaye senziwe ukuba silingise amanzi awayo ngokwendalo. Kwabaninzi, oku kunika igumbi lokuhlambela umoya opholileyo ngakumbi.
Amampunge okuhlamba kwigumbi lokuhlambela ziiseti ezibandakanya isinki, ikhabinethi, kwaye, ngamanye amaxesha, indawo yokubala. Imibhobho yemibhobho kwizinto ezingenaxabiso lokuhlambela ifihlwe ngaphakathi kwikhabhinethi. Ezi khabhathi- kwaye zihlala zinendawo yokubaleka- zinika abasebenzisi indawo yokugcina kwigumbi lokuhlambela.
Kaninzi zihlala zibhangqiwe ngesipili ukuzenza zilungele ukulungisa iinwele, ukwenza i-makeup, kunye nokulungela usuku lonke.
Ihlala iluncedo ukukhetha into engento phambi kokutshona kwegumbi lakho lokuhlambela kuba ikuvumela ukuba ucinge ngento enegumbi lokuqala kodwa, uya kufuna ukugcina engqondweni uhlobo lwesinki oyifunayo. Ngale ndlela, ungajonga ubalo kufakelo lwayo njengendawo yokwehla kwesinki.
Xa uqwalasela into engento, uya kufuna nokucinga malunga nendawo yokugcina oyifunayo. Ukuba ufuna ngaphezulu, iikhabhathi ezineedrowa zinokuba lukhetho oluncedo.
Jonga le nto yokubhabha yokuntywila ilize IAmazon
Amatye okuntywila asezantsi lukhetho olufanelekileyo kumagumbi okuhlambela ekwabelwana ngawo kunye nasekunene njengoko avumela abasebenzisi abaninzi bamampunge ngaxeshanye. Kumagumbi okuhlambela amancinci, awanakho ukhetho olusebenzayo. Xa isinki esetyenziswa kabini kwigumbi lokuhlambela elincinci, ihlala iyenye yeendlela ezimbini.
Indlela yokuqala iya kuba kukusebenzisa iperi yedrophu kwiisinki ecaleni-ngecala ngaphandle kwesithuba esiphikisayo phakathi. Uyilo olunomdla ngakumbi oluthi ngamanye amaxesha lusetyenziswe isitayile esikhulu sokuntywila kunye neepompo.
Izinto ezililize zangasese zekona ziyindlela elungileyo yokuba namampunge kwindawo encinci. Ezi zingena kwikona kwaye zibonelela ngendawo yekhabinethi ngaphandle kokuthatha isixa esikhulu segumbi lokuhlambela. Ukuba unegumbi elongezelelekileyo kwaye ufuna indawo ethe kratya yokugcina, ikhabhathi kunye nendawo yokubala zinokwandiswa ecaleni kweendonga.
Ngento engento yekona, ngaphezulu kwekhawuntari okanye ukuhla kweesinki kunokusetyenziswa. Isinki ihlala incinci kancinci, nangona kunjalo, ukwenza isinki sokuntywila kukhetho olungathandekiyo kolu hlobo lwento engento.
Izinto ezingenaxabiso ezimeleyo lulongezo olukhulu phantse kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela. Ezi zinto zililize zinokuba zincinci ukuba zilingane kumagumbi okuhlambela amancinci okanye zinokuba bubungakanani bezinto ezingelutho ezizeleyo ukulungiselela ubhafu obukhulu. Zihlala zikhulu kunokhetho olufana nesinki sokuntywila.
Ilize elizimeleyo elizimeleyo lima ngaphandle kodonga kunokuqhagamshela ngokupheleleyo eludongeni. Uninzi luthatha isigqibo sokutywina imiphezulu yeetafile yokuhamba ngokukhululekileyo eludongeni nge-caulk. Oku kunceda ukuthintela nawaphi na amanzi avuzayo phakathi kodonga namampunge.
Itafile oyikhethayo ngesinki yakho yokuhlambela inokuwunyusa uyilo. Zininzi izinto onokukhetha kuzo phaya, nganye ineendlela ezintle nezingalunganga.
Uninzi lwezi zokubala ziyafana onokukhetha ikhitshi lakho. Oku kubandakanya izinto ezinje ngegranite, imabhile, ikhonkrithi kunye nelitye eliyinjineli. Kukho ezinye iindlela ezithandwa kakhulu kwiimodemu zokuhlambela kunye neetile okanye i-countertops ye-laminate.
Uncedo lokuba imiphezulu yeetafile yokuhlambela inayo ngaphezulu kweekhitshi zokuphamba kukuba azizukubaleka kwimicimbi yobushushu ephezulu njengokupheka kokuchitheka. Olona phawu lubalulekileyo abaninimzi abaya kufuna ukulujonga xa bekhetha izinto zokubala kwindawo yokuhlambela yindlela izinto ezisebenza ngayo ukufuma.
Nje ukuba ufake isinki yakho yokuhlambela, uya kufuna ukuqinisekisa ukuyigcina ikwimo ephezulu. Eyona ndlela yokwenza oku kukuyigcina icocekile.
Okokuqala, kukho izinto ezithile oza kufuna ukuqinisekisa ukuzenza rhoqo. Ngenye, yicime ngeviniga kunye nomxube wamanzi ukunqanda ukutshabalalisa. Unokusebenzisa isoda yokubhaka ukujongana neengxaki ezinzima.
hamba ngobungakanani beeshawari
Ukucoca okunzulu, qala ngokuzalisa isinki sakho ngeesentimitha ezimbalwa zamanzi. Phosa ezinye zokucoca okuthandayo kunye neekomityi ezimbalwa zeviniga. Oku kuzakuqala ukucoca isinki uqobo ngelixa ungathi nkxu iraki kumxube ukucoca izinto ezifana netephu. Makhe ihlale imizuzu elishumi ubuncinci emva koko uyikhuphe kwaye usule isinki ezantsi.
Kukwabalulekile ukuba uqiniseke ukuba iinwele azibambeki kwisinki. Ukuba ubona isinki itsala kancinci, susa isivalo kwaye uzame ukukhathalela isivingco. Kwimeko apho ungenakho, zininzi ii-de-clogger kwintengiso zokukunceda.
Uyisusa njani iSink yokuhlambela
Vala amanzi ngezivalo ezivaliweyo ngaphambi kokuqala. Ezi zihlala zifumaneka emva kwesinki. Emva koko, sebenzisa isikrufu ukucima isinki kwiityhubhu zokuhambisa amanzi.
Okulandelayo, uya kufuna ukususa i-P-trap eneneni eyenziwe ngo-U kumbhobho wokuhambisa amanzi. Iiplothi zisebenza kakuhle koku kwaye unokufuna ibhakethi elingezantsi ngalo nakuphi na ukuvuza.
Khangela naziphi na iziqeshana, iibholiti, okanye izinto zokubopha ezidibanisa isinki kunye ne-countertop kwaye uzisuse. Ukuba kufuneka zaphulwe; Lumka ungonakalisi imiphezulu yeetafile. Imela yokusetyenziswa ingasetyenziselwa ukusika isitywina phakathi kwesinki kunye nekhawuntara okanye udonga. Isinki ngoku kufuneka isuke ngokulula.
Amanyathelo afanelekileyo okufaka isinki yokuhlambela aya kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwesitya sokuhlambela osikhethayo. Kananjalo, uya kufuna ukulandela imiyalelo yomenzi wamanyathelo athile.
Bukela le vidiyo ngendlela yokufaka isitya sokuhlambela esitsha kunye nefompe:
Ngokubanzi, uninzi lwabantu lucebisa uku-odolwa kokufakwa koompompo, izibambo kunye nezipeki, emva koko kuzike. Ngale ndlela, kulula ukondla imibhobho yamanzi eguquguqukayo koompompo ngaphambi kokutywina isink endaweni. Xa ufaka isinki ngokwayo, sebenzisa i-putty putty ukuyitshixela endaweni yayo. Sebenzisa imela yokubeka ukususa nakuphi na ukugqitha. Xa ufakela umgca wamanzi, i-beaded silicone isebenza kakuhle ngokutywina okungangeni manzi.
Unomdla wokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela? Zininzi Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo ezikhoyo zokukunceda ube nomfanekiso ngqondweni woyilo lwakho ngaphambi kokuthenga naziphi na izinto. Ezi nkqubo zinokukunceda uyile isicwangciso sakho somgangatho kwaye uzame ukugqiba okwahlukileyo kunye nezinto zokukunceda ufumane indawo yangasese oyifunayo.
Iindlela zikaNative NSL1915-A Nipomo Native Stone… $ 498.75 umthengisi ogqibelele (7) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-KOHLER K-20000-0 Caxton Ngaphantsi kweNtaba… $ 70.97$ 114.25 umthengisi ogqibelele (264) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ikona yeDonga leNtaba yeLize, Isinki emhlophe ... $ 299.00 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-70 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Eden Bath EB_S006LS-H oko kuxande Infin… $ 559.00 umthengisi ogqibelele (5) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
U-tiffany umama ohlaza okwesibhakabhaka womtshato womtshakazi
U-sequin ongumama walokhwe
Izipho zekrisimesi zentsapho yesoka